Fincila warra Gondoriin wal qabsiifnee maal hubanna? -
bilisummaa July 15, 2016	Leave a comment
Dhimma ANDM yeroo kaafnu dirqamatti OPDO keenya yaadanna. Yeroo ANDM ifaanis tahee harka lafa jalaatin ummata naannichaa hidhachiisu yookiis warra duraan hidhatee ture irraa hidhannoon akka hin hiikamne ittisu OPDOn Oromiyaa keessatti maal godhaa ture, jira? OPDOn faallaa kanaan ummata keenya kan duraanuu hidhannoo hin qabnee fi carraa ajaa’ibaatiin dabree dabree takka takka dhoksee qabu illee funyaan qabee irraa guursisee Wayyaaneetti galii godhe. Qawwee dhiisii meeshaalee waraanaa aadaa kan akka mancaa illee akka hin fayyadamne Baha Oromiyaa keessatti ifatti labsanii ummata irraa guuraa bahan. Akkuma beekamu saboota yookiis gosoota ollaa Oromiyaa tokko tokko waliin dabree dabree walitti bu’iinsi ni dhalata. Baha fi kaaba Oromiyaatiin kan akka Isaa fi Affaar waliin, Dhiha Oromiyaatiin kan akka saba Gumuz fi lammiilee saba Amaaraa Oromiyaa keessa qubatan waliin, Kibba Oromiyaatiin kan akka Garrii fi gosoota Somaalii biro waliin walitti bu’iinsi yeroon umamu hedduu dha. Yeroo akkasii ummanni keenya humna hidhatee gosoota biro irraa itti dhufu waan of irraa ittiin ittisu dhabee kumootaan ajjeefamaa yoona gahe. OPDOn kun illee itti dhagahamee saba keenya irratti hidhannoo qusachuu hin dandeenye. Hangamuu yoo diinaaf ergaman, yeroo sabni biraa qawwee hidhatee akka fedhe Oromoo ajjeesu Oromoon keenya maaliif hidhannoo dhabilee tahe jedhanii xiiqiidhaan of gaafachuun OPDO irratti mul’atee hin beeku.
Previous Masjiida Bilaal: Sagantaa Iidaal fixrii Ameerkia magaalaa Minisoottaa
Next Fears of ethnic violence as 10 killed during protests in northern Ethiopia